Real Madrid Oo Bar-Bardhac Dirqi Ah Lasoo Gashay Villarreal, Kooxda Unai Emery Oo Dagaalantay & Los Blancos Oo Dhibco Kale Lumiyay – Laacibnet.net
Real Madrid Oo Bar-Bardhac Dirqi Ah Lasoo Gashay Villarreal, Kooxda Unai Emery Oo Dagaalantay & Los Blancos Oo Dhibco Kale Lumiyay
Kooxda Real Madrid ayaa bar-bardhac lasoo gashay dhigeeda Villarreal oo soo muujisay qaab ciyaareed weyn isla markaana ciyaar ahaan ka wanaagsanayd in badan kooxda horyaalka difaacanaysa oo kulankan dhaawacyo badan qabtay.
Kulankan oo kusoo dhammaaday 1-1 ayuu bilawgii ciyaarta goolka Los Blancos saxeexay Mariano Diaz balse waxa xilli dambe gool rigoore ah ku kansalay Gerard Moreno.
GOOAL: Goolka furitaanka ee kulankan ayaan noqon mid daahay, Dani Carvajal ayaa garabka midig kubadda kasoo weerartamay waxaana uu kubad sarre oo cajiib ah u qaaday Mariano Diaz oo isaga oo goolka hortaagan madax raaciyay, goolkan oo ay Villarreal ku dooday inuu Offside ahaa ayaa gool loo xaqiijiyay.
Villarreal ayaa ku dhawaatay inay goolka looga naxsaday iska soo gudo daqiiqadii 21-aad, Parejo ayaa karoos cajiib ah oo uu goolka ku hor helay madax raaciyay balse isku daygiisa ayaa birta sarre ee goolka dul maray.
Carvajal oo kulankan halis weyn ku ahaa kooxda martida loo ahaa ayaa markale garabka midig kasoo xarooday balse kubadda uu doonayay inuu qaado ayaa shabaqa dambe ku aaday.
Qaybta hore ee kulanka oo ahayd mid ay labada kooxood weeraro badan isku qaadeen isla markaana ay Villarreal inta badan kubadda haysatay ayaa ku dhammaatay hoggaan 1-0 ah oo ay Real Madrid la hoyatay.
Gerard Moreno ayaa fursad dahabi ah ka lumiyay Villarreal daqiiqadii 75-aad ee kulanka, kubadda oo ay qaldeen daafaca Real Madrid ayaa goolka hortiisa loogu dhiibay Moreno oo isku dayay inuu garab mariyo goolhaye Courtois balse hareer mariyay birta goolka.
Parejo ayaa markale Villarreal oo weeraro holac ah soo qaadaysay ka qasaariyay kubad cajiib ah, daafaca bidix ee kooxdaas ee Estupinan ayaa baas fiican goolka hordhigay waxaana kubadda si xoogan u laagay Daniel Parejo oo goolka hareer mariyay.
RIGOORE + GOOAL: Goolhaye Courtois ayaa rigoore ku galay Chukwueze oo bedel ku yimid waxaana gool u bedelay Gerard Moreno oo uu darbadiisa raacday Courtois balse xakamayn waayay isaga oo kulanka 1-1 ka dhigay.
Moreno ayaa markale ku dhawaaday inuu hoggaanka usoo gacan geliyo kooxdiisa, kubad laga soo boobay Luka Modric ayaa goolka si sahlan loogu dhigay weeraryahanka ree Spain balse Raphael Varane ayaa si dirqi ah kaga soo gaadhay dhinacna u saaray kubadda.